Tatitra momba ny zon'olombelona :: Fonja telo amby roapolo marefo tanteraka • AoRaha
Tatitra momba ny zon’olombelona Fonja telo amby roapolo marefo tanteraka
Milaza ny avy ao anivon’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny zon’olombelona (Cnidh), araka ny tatitra navoakan’izy ireo, fa « misy lesoka ny fitazonana gadra any am-ponja eto Madagasikara. Tsizarizary ny telo amby roapolo tamin’ireo fonja roa amby valopolo nanaovan’izy ireo fitsidihana. Nanao fangatahana mba hahafahana manatsara izany ny ao amin’ity Vaomiera mahaleotena misahana ny zon’olombelona ity. Tsikaritra koa ny fijaliana mihatra amin’ireo voafonja, tahaka ny fahalavan’ny fe-potoana itazomana an’ireo olona mbola miandry fitsarana na ireo voatazona am-ponja vonjimaika.
Noresahina manokana io lafiny fijalian’ny voafonja io, tetsy Andraharo omaly, nandritra ny fivoriana nataon’ny Cnidh sy ny l’ACAT de Madagascar, izay fikambanana misahana ny zon’olombelona. Niompana tamin’ny fitsidihana fonja natao tamin’ny volana jolay ny fivoriana.
Ankoatra izay, fantatra, araka ny tatitra nataon’ny Cnidh hatrany, fa mbola betsaka ny zavatra mila fanarenana manoloana ny fampijaliana sy tsy fanajana ny zon’olombelona.
Efa nisy, ohatra, ny fidinana ifotony nataon’ny solontena avy ao amin’ny Cnidh tamina toeram-pitsaboana iray teny Mahitsy, tamin’ny volana febroary lasa teo, mikasika kosa ny fisiana marary iray voafatotra rojovy. Nanao fanadihadiana ny tao amin’ity Vaomiera mahaleotena misahana ny zon’olombelona ity fa endrika fampijaliana ny fampiharana an’ireo dina tsy ara-dalàna, tahaka ny « Besaboha » any amin’ny faritra Sofia.
Manamafy ny Cnidh fa toa lasa adino ny fisian’ireo herisetra sy fampijaliana nataon’ny mpitandro ny filaminana, toy ny raharaha Antsakabary, taorian’ny antso avo nataon’izy ireo.
Fidirana ho mpitandro filaminana :: Hotakina bakalorea ireo mpianatra ho zandary